Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): ကမ္ဘာမြေကို သွေးအများဆုံး စွန်းစေခဲ့သူ- မွန်ဂို ဧကရာဇ်- ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့် နက္ခတ် ပညာ..(၁)
ကမ္ဘာမြေကို သွေးအများဆုံး စွန်းစေခဲ့သူ- မွန်ဂို ဧကရာဇ်- ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့် နက္ခတ် ပညာ..(၁)
မွန်ဂို ကုန်းမြေမြင့် တောင်တန်း တွင် နေထိုင်သူများ အဘို့- အေးမြသော ဆောင်းဒဏ်ကို အရိုးခိုက်အောင် ခံစားကြရသည့်- စက်တင်ဘာလ ကာလ ည တစ်ည ဖြစ်တော့၏။
ဖြစ်ချင်တော့- အစွန်းရောက် သော မွန်ဂို ရာသီဥတု၏ အရိုးခိုက်အောင် အေးမြသည့် ဆောင်းလေ တစ်သုန်သုန် တိုက်နေသည် သာ မက - ယနေ့ည အဘို့မှာမူ- လမင်း၏ ချမ်းမြေ့သော လွှမ်းမိုးမှု အလင်းရောင် ကိုပါ မြင်တွေ့ခွင့်မရသည့် လကွယ်နေ့ညလည်း ဖြစ်ပြန်၏။
တစ်နည်းအားဖြင့်- ဆောင်းကာလ လကွယ်ည၏ သန်းခေါင် မတိုင်မီ လေး-
မိုးတိမ်များ ကင်းစင်သော မွန်ဂိုတောင်တန်းများ တွင် လရောင်၏ လွှမ်းမိုးမှု ကင်းမဲ့ ပျောက်ဆုံးနေခြင်းကြောင့်- အခြားသော ကြယ်၊ နက္ခတ် တာရာများကို အခြားခြား သော နေ့များနှင့် များစွာ ပိုသာလျှက်-ယနေ့ည တွင် မြင်တွေ့ရသည် ဟုဆိုနိုင်တော့၏။
အထက်ပါ- ကြယ်၊ နက္ခတ် တာရာတို့တွင်- လုံးဝ မပါဝင်ပဲ ကောင်းကင်ယံတွင် ထူးခြားစွာ ပျောက်ဆုံး နေသည် များက- တော့ .. တနင်္ဂနွေ မှ- စနေ အဆုံး ဂြိုဟ် ၇-လုံးတို့ ပင် ဖြစ်ကြ၏။
နေမင်း၊ လမင်း၊ ဆိုသော တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေ ဆိုသော- နေ့ ၇-နေ့ ကို အစိုးရသော ဂြိုဟ်မင်း ၇-နှစ်လုံး တို့သည် မိုးကုတ် စက်ဝိုင်းအောက်တွင် ရောက်နေသဖြင့်- ယခု အခိုက်တွင် မမြင်ရနိုင်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းသည်က- ထို ၇-လုံးသော ဂြိုဟ် အားလုံးတို့သည် ယခု ကာလတွင် မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း အောက်ဘက် ရောက်နေသော ကန်ရာသီတွင် တည်လျှက်- တိတိ ကျကျ အားဖြင့် ဆိုရပြန်သော်- အင်္ဂါနှင့် ဗုဒ္ဓဟူးတို့သည် ကန်ရာသီ စိတြ နက္ခတ်၊ ကျန်ဂြိုဟ် ၅-လုံးတို့သည်- ကန် ရာသီ- ဟဿတ နက္ခတ် တို့တွင် တစ်ပြိုင်နက် တည်ရှိနေခိုက်-
ထိုဂြိုဟ်တို့သည်- အံသာများ အလွန်နီးစပ်စွာ ပူးကပ်နေခြင်းကြောင့်- ဂြိုဟ်များ အချင်းချင်း အားပြိုင် စစ်ထိုးနေသည်ဟု ခေါ်တတ်ကြသော- ဂြဟယုဒ္ဓ အချိန်-
ပုံမှန်အားဖြင့်- ဂြိုဟ် ၂-လုံး၊ ၃-လုံးမျှသာ အားပြိုင်ရတတ်သော်လည်း- ယခု - ယနေ့ တွင်တော့- ရှိရှိသမျှ သော ဂြိုဟ်များ အားလုံး လိုလို အားပြိုင် စစ်ထိုးနေကြချိန်။
လူသား ကလေးငယ် တစ်ယောက်- ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ရှင်သန် ရောက်ရှိခဲ့၏။
မွေးဖွားလာသော ကလေးငယ်သည်- ရဲရဲနီသော သွေးခဲ တစ်ခုကို လက်တွင် ဆုပ်ကိုင်လျှက်- မိခင်၏ ၀မ်းဗိုက်မှ သည် ပြင်ပ လောက ဆီသို့ ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
ပုံမှန် လကွယ်ညမျိုး မဟုတ်-
နေကြတ်သော- နေ့၏ လကွယ်ည.
နေတစ်ခုတည်း ကြတ် သည်မဟုတ်- များစွာသော ဂြိုဟ်တို့သည်- လောင်ဂျီတွဒ် မျှသာ မက- Declination ခေါ် လတ္တီတွဒ်အားဖြင့်လည်း- ကမ္ဘာနှင့် တစ်တန်းတည်း နီးနီး ကျရောက် နေခဲ့သဖြင့်- သာမာန် ဂြဟ ယုဒ္ဓ ခေါ် ပုံမှန် ဂြိုဟ်စစ်ထိုးချင်းမျိုး မဟုတ်ပဲ- အထူး ဂြဟ ယုဒ္ဓ ဟုပင် ခေါ်တွင် ရမည် ဖြစ်၏။
(Alignment for Conjuction and Opposition ဇယားဖြင့် ဖေါ်ပြထားသည်ကို လေ့လာနိုင်ပါသည်။)
တာတာ လူမျိုးစု - တစ်စု၏ ခေါင်းဆောင် တစ်ဦး ဖြစ်သော- “ယဆုခယ်” မှ မွေးလာသော ထိုကလေးငယ်ဟာ “တမူးဂျင်” ဟု အမည်ပေးခဲ့ကြ၏။
ထိုကလေးငယ် သည်- နောင် နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာ အထိ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုး အားလုံးမှ- “ဂျင်ဂစ်ခန်” ဟု သိရှိသွားကြရသော-
တစ်နည်းအားဖြင့်- ထိုစဉ်ကာလ- က ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ အပုံ ၂၀ ပုံ တစ်ပုံ- တစ်နည်းအားဖြင့် လူဦးရေ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ကို အသက်ပျောက်စေခဲ့သော-
မဟာ အလက်ဇန္ဒား ဘုရင်၏ အင်ပိုင်ယာ၏ ၄-ဆ။
အနှစ် ၄၀၀ တည်ဆောက်ခဲ့ရသော ရောမ အင်ပိုင်ယာ၏ ၂-ဆ ကျယ်ပြန့်သော အင်ပိုင်ယာ ကို အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့သည့်-
မွန်ဂို စစ်ဘုရင်ကြီး ဖြစ်လာမည် ဟု မွန်ဂို မိသားစုဝင်များက ထိုအချိန်က မသိရှိခဲ့ရ..
အချို့သော- ကောင်းကင် နက္ခတ် ပညာကို တတ်ကျွမ်း နားလည်ကြသော- အာရပ်၊ စပိန်၊ ဂရိ၊ ရောမ နှင့် စစ္စလီ နက္ခတ်ပညာ ရှင် အချို့တို့သည်- ကမ္ဘာပေါ်တွင် ကြီးမားသော အန္တရာယ် မုန်တိုင်းကြီး တစ်ရပ် ကျရောက်မည်။ ထိုကာလသည်- ဂြိုဟ်များ အားလုံး- တူရာသီ အနီး အနားတွင် တစ်ပြိုင်နက် စုစည်းတည်နေသော ကာလပိုင်း ဖြစ်မည်ဟု ဟောပြော ခဲ့ကြ၏။
ပါရှန်း လူမျိုး နက္ခတ်ပညာရှင်- Al'hakim သည်- ယေရှု ခရစ်တော် ဖွားမြင် မည့် အကြောင်း၊ တမန်တော် မိုဟာမက် ပေါ်ပေါက်မည့် အကြောင်းများကိုလည်း- နှစ်ပေါင်း များစွာကပင် ကြိုတင် ဟောပြောခဲ့သွားဘူးသေး၏။
ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့် ပါးရှန်း ဘုရင်။
အကယ်၍- သင်သည် အီရန် နိုင်ငံသား တစ်ဦး - ယခင် အခေါ် အားဖြင့် ပါးရှန်း နိုင်ငံသား တစ်ဦး နှင့် စကားစမည် ပြောဖြစ်မည် ဆိုပါအံ့..
ယခုခေတ် အခေါ် အီရန်၊ တစ်ချိန်က ပါးရှန်း နိုင်ငံတော်အား-
လူပေါင်း သိန်းနှင့် ချီ၍ သတ်ဖြတ်ခဲ့ရာတွင်- အရှင်လတ်လတ် မျက်လုံး ဖေါက်ထုတ်၊ ခေါင်းဖြတ်ပြီးနောက်- ဦးခေါင်းမဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာများကို သံချွန်ကြီးများပေါ်တွင် တန်းလန်း တစို့ ထိုးလျှက်- အများအား ကြောက်လန့် စေမှု ကို ဖြစ်စေခဲ့သော- ဂျင်ဂစ်ခန် ၏ အကြောင်းများကို ကြားရ နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ပါရှန်းပြည်အား- တိုက်ခိုက် ချေမှုန်းရာတွင်- ကိုလိုနီ ဒေသ ကျူးကျော် လိုခြင်းထက်- ရန်ကြွေး တုန့်ပြန်ခြင်းက အဓိက အကြောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်၏။
သက္ကရာဇ် ၁၂၁၈-ခုနှစ်တွင် တရုပ်ပြည် မြောက်ပိုင်းကို အောင်နိုင်ခဲ့သော ဂျင်ဂစ်ခန် သည်- ပါးရှန်း နန်းဆက် ဖြစ်သော ခ၀ါ ရစ်ဇမစ် နန်းဆက်၏ ဘုရင်- ရှား အလာ အဒ္ဒင် မုဟမ္မဒ် ထံသို့ - ကုန်သွယ်ရေး တမာန်များ ပို့လွှတ်ခဲ့၏။
ထိုစဉ်က- ယခု အီရန် နိုင်ငံ၊ ဥဇဘက် ကစ္စတန် နိုင်ငံ၊ တာ့်က်မန်စ္စတမ် နိုင်ငံများကို လွှမ်းမိုး အုပ်စိုးနေသော ရှားဘုရင် သည်- ကုန်သွယ်ရေး တမာန်များ အား သူလျှိုဟု မသင်္ကာဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအား သေဒဏ်ပေး၍- အခြားသော ကုန်သည်များအား မုတ်ဆိပ်ရိတ်ပြီး- မွန်ဂို ဒေသသို့ ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး ပြန်ပို့လိုက်၏။
မိမိ၏ ရန်ကြွေး၊ မိမိ၏ အတ္တမာနကို ထိပါးသော အရှက်ကျွေး၊ မိမိအား တစ်ပါးသူက ပြုခဲ့ဘူးသော ကျေးဇူးကြွေး တို့ကို - တုန့်ပြန်ရမှ ကျေနပ်တတ်သော ဂျင်ဂစ်ခန် သည် ပါရှား ပြည်သို့ အလုံးအရင်း နှင့် ၀င်ရောက် ထိုးဖေါက်လာတော့၏။
သက်ဆိုင်ရာ မြို့များသို့ ရောက်လာပါက- အညံ့ခံမလား- စစ်ယှဉ် မလား ဟု ရာဇသံ ပေးလျှက်- အညံ့ခံမည် ဆိုလျှင်- အသက် ချမ်းသာပေး၍- အညံ့မခံ သော မြို့များတွင်မူ- ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ ကလေး၊ လူကြီး မကျန် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ် ခဲ့၏။ သို့ရာတွင်- သူ၏ ကတိတည်ကြောင်း ကိုတော့- အညံ့ခံခဲ့သော ယာ့ဇ်တ် နှင့် ရှီရက်ဇ် မြို့များကို ချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းက သက်သေခံခဲ့၏။
ယခု အီရတ်နိုင်ငံ- ဘဂ္ဂဒက် မြို့၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူ-က ပါရှားပြည်၏ ရှားဘုရင် အား- ယခင်ကပင် မသင့်မြတ်သူ ဖြစ်သဖြင့်- မွန်ဂိုတို့ဖြင့်- မဟာမိတ် ပြုရန် ကြိုးစား၏။ သူကြိုးစားပုံမှာ- ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲကြီး အတွင်းက ဖမ်းဆီး ရမိထားသော ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး တပ်သား သုံ့ပန်း များအား- ဂျင်ဂစ်ခန် ထံသို့ လက်ဆောင် ပဏ္ဏာပြု မိတ်ဖွဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။ မိမိတွင် ကြီးမားသော စစ်အင်အားရှိထားပြီး- အခြား လူပို မလိုသော ဂျင်ဂစ်ခန် အနေဖြင့်- သုံ့ပန်း စစ်သည်များအား အလိုမရှိသောကြောင့်- ၄င်းတို့အား သက်ဆိုင်ရာ ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ ပြန်ပို့ပေးလိုက်၏။
ပါးရှန်းတို့၏ ခ၀ါ ရစ်ဇမစ် နန်းဆက်ကြီးအား ဖျက်ဆီးပစ်ရန်မှာ - ဂျင်ဂစ်ခန် အတွက် ၂-နှစ် မျှပင် မကြာလိုက်။
ထို့နောက်တွင်တော့- ဂျော်ဂျီယာ၊ ကရိုင်းမီးယား၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ အိန္ဒိယ နှင့် တရုပ်ပြည် တစ်နိုင်ငံလုံး မွန်ဂိုလက်အောက် ရောက်သွားပြီး- ဂျင်ဂစ်ခန်၏ အင်ပိုင်ရာသည်- တရုပ်ပြည်မှသည် Black Sea ခေါ် ပင်လယ်နက် ဒေသ အထိ ခြေဆန့် ခဲ့တော့၏။
ဂျစ်ဂစ်ခန်၏ မွန်ဂိုတပ်ကြီးသည်- သဲကန္တာရတွင် အပင်များ စိုက်ပျိုး နိုင်ရန် လုပ်ဆောင် ထားသော ပါးရှားတို့၏ အင်မတန် အဆင့်မြင့်သည့်- မြေအောက် ရေပေး စိုက်ပျိုးရေး စနစ်ကြီးပါ- တစ်ပါတည်း ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ သဖြင့်- ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးသော ဒုဗ္ဘိကန္တာရ ကပ်ကြီးကိုပါ- နောင် နှစ် ၁၀၀ လောက် အထိ- ပါးရှား နိုင်ငံတွင် ဖြစ်သွား စေခဲ့၏။
မွန်ဂိုတပ်၏ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် လည်းကောင်း- ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု ကြီးကြောင့် လည်းကောင်း- ပါးရှား လူဦးရေ ၂-သန်းခွဲ ခန့်မှ သည် ၂-သိန်းခွဲ အထိ လျော့ကျသွားခဲ့ရသည် ဆို၏။
ပါးရှားပြည်အား ဖျက်ဆီးချေမှုန်းခဲ့ရာတွင်- ရာဇ၀င် တွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ဂျင်ဂစ်ခန်၏ စကားမှာမူ-
“I am the Scourge of God! If you had not committed great sins, God would not have sentapunishment like me among you.”“ငါသည်ကား- ဘုရားသခင်မှ ဆုံးမရန် စေလွှတ်လိုက်သူ ဖြစ်၏။ သင်တို့တွင် မကောင်းမှု များ ကြီးကျယ်စွာ မလုပ်ထားပါက- ဘုရားသခင်သည်- ငါကဲ့သို့ ဆုံးမ မည့်သူကို သင်တို့ထံ လွှတ်လိုက်မည် မဟုတ်.. ”
ဟု ပင် ဖြစ်တော့၏။
(ဓါတ်ပုံများကို https://ridgeaphistory.wikispaces.com/Genghis+Khan မှ ယူထားပါသည်။ Credit to https://ridgeaphistory.wikispaces.com/Genghis+Khan)
ဂျင်ဂစ်ခန် ၏ နောက်ဆုံး ခရီး။
ပါးရှားပြည်ကြီးအား ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး- ၁၀ နှစ် မကြာခင်မှာပင်- ဂျင်ဂစ်ခန် သေဆုံး ခဲ့ရ၏။
သေဆုံးပုံကို ပြောကြပုံ အမျိုးမျိုးရှိရာတွင်- မှတ်တမ်းများ အနေဖြင့်-
မြင်းပေါ်မှ လိမ့်ကျသော ဒဏ်ကြောင့် တစ်ဖြေးချင်း သေဆုံးရသည် ဟူ၍ လည်းကောင်း-
အဆုတ် အအေးမိသော ရောဂါကြောင့် ဖြစ်သည် ဟူ၍ လည်းကောင်း၊
သူဖမ်းထားသော တရုပ်မင်းသမီးတစ်ပါးက- သူမ၏ အင်္ကျီတွင်း ၀ှက်ယူလာသော ဓါးမြှောင်ဖြင့်- ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ငယ်ပါအား လှီးဖြတ် ပစ်လိုက်သဖြင့် ဟူ၍ လည်းကောင်း..
ဟူ၍ အမျိုးမျိုး ကွဲလွဲနေကြ၏။
ဂျင်ဂစ်ခန် ၏ ဇာတာ အား နက္ခတ်ပညာ ရှုထောင့်မှ လေ့လာခြင်း။
ဆရာကြီး ဘီဗွီ ရာမာန် သည်- သူ၏ ထင်ရှားသော စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်သည့်- “Notable Horoscope” စာအုပ်တွင် ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဇာတာ အကြောင်း လေ့လာခဲ့သည်။
သမိုင်းမှတ်တမ်း များအရ- ကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသောကြောင့်- မိုးတား အမြင် ဖြင့် တွက်ယူ ထားသော ရက်စွဲ နှင့် ဆရာကြီး ဘီဗွီ ရာမာန် အသုံးပြုသော ရက်စွဲ - မွေးချိန်မှာ ကွာခြားမှု ရှိသော်လည်း- ၄င်း၏ စာအုပ်တွင်လည်း-ဆရာကြီးသည်- ဇာတာရှင်အား ကရကဋ် လဂ်ဟူပင် ယူဆ ထားခြင်း ဖြစ်၏။
မိုးတားမှ အသုံးပြုသော မွေးနေ့မှာ- ယခုခေတ်သုံး ဂရီဂိုရီယမ် ပြက္ခဒိန် အားဖြင့်- ၁၁၈၆-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ- ၂၁-ရက်၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုသော ဂျူလီယန် ပြက္ခဒိန် အားဖြင့် စက်တင်ဘာလ- ၁၄-ရက်၊ တနင်္ဂနွေ ဖြစ်ပြီး- ဆရာကြီး ရာမာန် အနေဖြင့်- ၁၁၈၆-ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ- ၁၆။ ၁၅-ရက် နံနက် ၁း၃၀ ဟု ယူဆပါသည်။
နက္ခတ်ပညာ သုတေသီများ အတွက် အဓိက လမ်းညွှန်မှု များ၊ အချက်အလက်များ စုဆောင်း မျှဝေသည့် http://www.astro.com/astro-databank/Khan,_Genghis ဆိုက်မှလည်း- ဂျူလီယန် ပြက္ခဒိန် အားဖြင့် စက်တင်ဘာလ- ၁၄-ရက်၊ ည ၁၁း၅၀ ဟု ပြဆိုထားပါသည်။
မိုးတား အနေဖြင့်မူ ဇာတာရှင်၏ ဖြစ်ရပ်များ နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး- ည ၁၁း၅၀ အစား- ည ၁၁း၅၈- (သန်းခေါင်မတိုင်မီ ၂-မိနစ်) အနေဖြင့် ပြန်လည် ညှိယူပါသည်။
ဂျင်ဂစ်ခန် နှင့် ကာလသပ္ပယောဂ။
ပြီးခဲ့သော ဆောင်းပါးများစွာတို့တွင်- အိန္ဒိယ ဗေဒင်ဆရာများ၏ ခြောက်လှန့် နေကျ ယုဂ် တစ်ခု ဖြစ်သည့်- ကာလသပ္ပ ယောဂ အကြောင်း နှင့် - မကောင်းပါဘူး၊ အင်မတန် ဆိုးပါသည် ဆိုသော်လည်း - လူဘောင် လောက တွင် အထွဋ်အထပ် အောင်မြင်မှုရရှိသည့် ဇာတာရှင် တို့ အကြောင်းကို ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်၏။
ထိုအခါ- စာဖတ်သူတို့ အနေဖြင့်- ကာလသပ္ပယောဂ ရလျှင်- အထွဋ်အထိပ် ကောာင်းနိုင်မည် ဟု လည်း အလွဲ နားလည် သွားမည်ကိုလည်း စိုးရိမ် မိ၏။
မိုးတား အနေဖြင့်- ကာလ သပ္ပယောဂ ကို လုံးဝ လက်မခံပါ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် မည်သည့် ရှေးနက္ခတ် ပညာရှင် ကြီးများကမှ အသုံး မပြုခဲ့ပဲ- မပြောခဲ့ပဲလျှက် နောက်မှ ပေါ်လာသော- တီထွင်ထားသည့် ယောဂ ဖြစ်သောကြောင့် ပင် ဖြစ်၏။
မည်သို့ ဆိုစေ- ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဇာတာကို လေ့လာမည် ဆိုပါက- မြင်လွယ်သော- ကာလသပ္ပယောဂ ကိုလည်း ကြည့်နိုင်ပါသေး၏။
ကာလသပ္ပယောဂ ကိုပင်- ကာလသပ္ပယောဂ နှင့် ကာလ အမြိတ္တ ဟူ၍- ၂-မျိုးခွဲ လေ့လာပါကလည်း- ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဇာတာသည် ကာလသပ္ပယောဂ အမျိုးအစားတွင်ပင် ပါ၏။
တနည်း အားဖြင့် ၄င်းသည် ပုံ (၁) အတိုင်း ရာဟု နှင့် ကိတ် ကြားတွင် ဂြိုဟ်များ တည်ခြင်း ဖြစ်၍- “ဥဓိ ဂေါလရဒ္ဓ” ဟု လည်းကောင်း၊ “ဂါရသစ္စ ယောဂ” ဟု၍လည်းကောင်း ခေါ်သော အမျိုးအစား ဖြစ်၏။
တစ်ဖန်- လဂ် ၏ တည်နေရာ အလိုက်အားဖြင့် လည်း- ပုံ (၁) အနေအထား တွင် ကိတ် ခေါ် မြွေအမြီး သည် လဂ်မှ ၆-တန့် အတွင်းတွင် တည်နေပါက- ၄င်းအား “၀ိလောမ ကာလသပ္ပ ယောဂ” ဟု ခေါ်ပြီး- ၄င်းသည် အလွန်ဆိုးသော အကျိုးပေးသည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။
အိန္ဒိယ ဆရာတို့၏ အဆိုအရ- “ကာလသပ္ပ ယောဂ” ရှိသူသည်-
အသက် ၃၅-နှစ် (အသေးစိတ်ကို ဆက်ကြည့်ပါ။) အရွယ် အထိ ကောင်းသော အကျိုးပေးခွင့် မရ။
စိတ်အနားမရ၊ အဆိုးမြင် ဘ၀ နှင့် ဘ၀တွင် မတည်ညိမ်မှုများ ရပြီး- မကြာခဏ မြွေနှင့် ပတ်သက်သော အိပ်မက်များ မက်တတ် သည် ဆို၏။
ချစ်ခင် သူများ၏ လိမ်လည် လှည့်ဖျားခြင်းကို ခံရတတ်သည် ဆို၏။
အထူးသဖြင့် ရာဟု နှင့် ကိတ် ဒဿာ ကာလများတွင်- စိတ်ဒုက္ခများ ကြီးကျယ် စွာ ခံစားရမည်။ မကောင်းသော အရာများတွင် စွဲလမ်း တတ်ပြီး၊ ဘ၀၏ တစ်ဝက် လုံးလုံး ဒုက္ခ သုက္ခ နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဆို၏။
ရာဟုသည် ၁၀-တန့်၊ ကိတ်- ၄-တန့် တွင်တည် ၍ အခြားဂြိုဟ် ၇-လုံးတို့သည် ထိုဝင်ရိုး၏ တစ်ခြမ်းတည်းတွင်သာ တည်လျှင်- “ဂတက္က ကာလ သပ္ပ ယောဂ” ဟု ခေါ်ပြီး- အမှုအခင်းများ နှင့် ဘ၀တွင် ရင်ဆိုင်ရမည်။ တရားဥပဒေ ၏ ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်း ခံရမည်။ သို့သော်- ကန်လဂ် နှင့် သိဟ် လဂ် ပိုင်ရှင်များ အတွက်မူ အကျိုးပေးသော အချိန်တွင်- နိုင်ငံရေး သြဇာ အာဏာ ရမည် ဆို၏။
ဂျင်ဂစ်ခန်၏ ဘ၀ တွင် ဆိုးဝါးမှုများ၊ အတိဒုက္ခရောက်မှုများ- များစွာ ရှိခဲ့၏။
ဤသည်မှာ လည်း အခြားခြားသော အကြောင်းများစွာ ကြောင့် ဖြစ်၏။
သူသည် ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများ၏ ပိုင်ရှင်ဖြစ်၏။ အားလုံးသော လူတို့သည် သူ၏ အမည်ကြားသည် နှင့် ကြောက်လန့် တကြား ဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်မှာလည်း အခြားခြားသော အကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်၏။
ထိုထို အကြောင်းများကို သူ၏ ဘ၀ နှင့် ယှဉ်တွဲ၍- ဆက်လက် ဖေါ်ပြပေးပါမည်။
Labels: ကာလသပ္ပ ယောဂ, ဂျင်ဂစ်ခန်၊ မိုးတား နက္ခတ်
ကမ္ဘာမြေကို သွေးအများဆုံး စွန်းစေခဲ့သူ- မွန်ဂို ဧကရ...